Umhlahlandlela ophelele wokuqonda ukuthi ungayisebenzisa kanjani iBinance - Cazoo
Faka usesho lwakho lapha
Umhlahlandlela ophelele wokuqonda ukuthi ungayisebenzisa kanjani iBinance
Ikhaya » Ikhaya » Umhlahlandlela ophelele wokuqonda ukuthi ungayisebenzisa kanjani iBinance
Tag: Binance, Ukuhweba nge-Crypto, Exchange, I-Launchpad, I-Launchpool, Umkhawulo wokulinganisa, I-oda lemakethe
Isikhathi sokufunda: 16 imizuzu
Ngabe uzama ukufaka izinzwane zakho ku-cryptography okokuqala noma uthole leyo edume the Altcom futhi udinga ukudlula eCoinbase ukuze uyithole? Uma lokhu kwenzeke kuwe ngaphambilini, ungahle ubheke i-Exchange ekunika ukufinyelela kumakhulu ama- the Altcom nokuhweba ngababili. Ukushintshisana okunikeza izinketho eziningi zokufaka amadola, amakhilogremu, ama-euro ... mhlawumbe, futhi mhlawumbe, mhlawumbe nawe unentshisekelo yokuba nethuba lokuhweba Futures ukuthola inzalo kwi-cryptocurrency yakho. Mhlawumbe ufuna nokuthola eyodwa ikhadi le-Visa Visa. Mhlawumbe mhlawumbe ufuna ukubamba iqhaza kwenye yalezo i-IEO engaqondakali (Ukunikezwa Kwe-Initial Exchange) othile akutshele ngakho .. ukuthi ufunde kwenye indawo .. izindaba ezimnandi wonke umuntu! Kukhona le Phantom Exchange enikeza konke lokhu nokunye okuningi. Ngempela, kungukushintshaniswa kwenombolo eyodwa kwe-idijithali yemali emhlabeni: Binance.
Ngibhala umhlahlandlela ocacile wabaqalayo ukusebenzisa i-Binance. Isinyathelo ngesinyathelo, ukuthi ungathenga kanjani i-Bitcoin ngemali ejwayelekile ye-fiat, sizobona ukuthi singathengisa kanjani ku-Exchange futhi sikunikeze ukubuka konke okuphelele kwezinye izici eziyinhloko ze-Binance. Sizobheka nokuthi ungasithola kanjani isaphulelo semali yokuhweba engama-40% ukuze ukwazi ukugcina okuningi kwalezo zinzuzo ze-crypto esikhwameni sakho semali ngangokunokwenzeka.
Ingabe umusha lapha? Uyemukelwa!
Lapha e-cazoo inhloso yami ukukhumbula ngekhanda, ngokulibhala, imininingwane engiyiqoqayo nsuku zonke ku-inthanethi, ngoba le bekuyindlela yami yokufunda njalo. Uma ngiyibhala, ngiyayikhumbula. Esikhundleni sokukwenza nje ngezwi, ngikwenza lapha, ukuze ngikwazi ukusiza omunye umuntu ngamanothi ami. Ngizokhuluma nawe ngikhuluma ngedwa, sengathi yidayari.
Njengoba wonke umuntu ethi angisiye abeluleki bezezimali mhlawumbe kufanelekile ukumboza isinqe sakho, bese nami ngizokusho: Angiyena umeluleki wezezimali, Angikutsheli ukuthi ungayitshala kanjani imali yakho futhi angisoze ngazivumela.
Ukulungele ukufunda konke mayelana neBinance? ISITHOMBE.
Ngabe iBinance imboza yonke i-crypto engiyithandayo?
Ukufaka i-Crypto ku-Binance
Ungonga kanjani kuma-commissions
Ukukhushulwa ekhasini le-Binance Home Page
Ungathengisa kanjani ngeBinance?
Amanye amasevisi onikezwayo?
Ake sithathe ukubuka konke kweBinance njengenkampani? Ngemuva kwakho konke, mhlawumbe kuwumqondo omuhle ukwazi ukuthi ubhekene nobani ngaphambi kokufaka imali kungxenyekazi yabo.
Iphuzu lokuqala ngokumelene: akekho owazi kahle ukuthi iBinance ikomkhulu lini. Abaningi bathi iMalta, nokho cishe ngonyaka owedlule umlawuli waseMalta waphendula mathupha ukusho ukuthi iBinance ayikho ngaphansi kwegunya laseMalta. Noma kunjalo, ingabe kuyinkinga ngempela? Unentshisekelo yokwazi ukuthi iBitcoin isekelwe kuphi? Lezi yizinkampani ze-cryptocurrency. Mhlawumbe kungcono ukuthi ungabahluleli ngendlela obengenza ngayo ngenkampani yendabuko. Ngemuva kwakho konke, iBinance isemhlabeni wonke futhi inamahhovisi anabasebenzi emhlabeni wonke emazweni azungeze ama-50.
Ngabe abafana beBinance bacashile nabo? Ngingasho ukuthi cha: phakathi kwabo kukhona umsunguli odumile nezazi zezezimali uChangpeng Zhao, owaziwa kangcono njengo-CZ, obamba iqhaza ezingxoxweni eziningi, ubhala kaningi ku Twitter futhi ngisho nosuku olulodwa luyavela esembozweni somagazini iForbes. Ngokwalo magazini, i-CZ ibukeka ingumuntu wesihlanu ocebe kakhulu kwi-idijithali yemali enenani elifanele lokulinganiselwa ku- $ 1,9 billion.
Changpeng Zhao esembozweni seForbes
Yethulwe ku-2017, ngemuva kwe-ICO ephumelele eyaqongelela u- $ 15 million lapho abatshalizimali bathola amathokheni we-BNB ngokushintshana, ngenani lokuqala lamasenti ayi-10. Namuhla i-BNB izulazula cishe ngama- $ 250 .. hhayi imbuyiselo embi ekutshalweni kwemali kulabo abathembele i-CZ zisuka nje. Ngo-2019, uBinance wakhiqiza cishe amaRandi ayizigidi ezingama-570 enzuzweni, futhi ekupheleni kuka-2020 i-Exchange iyodwa yayinenzuzo ezungeze u- $ 1 billion. Futhi ngo-2020 uBinance une ithole umphakeli wamakhadi we-cryptographic Swipe, iphrojekthi ebiza cishe ama- $ 200 wezigidi. Isanda kuthola i-coinmarketetcap.com nge $ 400 million. Olunye utshalomali lwamasu faka i-FTX Exchange, ithokheni lakhe lingenye yezimali ezingama-40 eziphezulu futhi linenani lemali engaba yimali eyizigidi eziyizinkulungwane ezimbili.
Lokhu engisanda kukubalula akulona uhlu oluphelele lwayo yonke into iBinance efake imali kuyo ngamasu, kepha ngicabanga ukuthi uyaqonda ukuthi iBinance Exchange akuyona neze iphrojekthi yokuqedwa kwenye indawo. Cha, yi-Crypto Exchange ephumelela kunazo zonke emhlabeni, eholwa ngumsunguli owazuza eminyakeni emithathu nohhafu lokho okungathatha izigidigidi eziningi impilo yonke futhi, ngaphezu kwalokho, uBinance akanazo izinhlelo zokunciphisa ukunwetshwa kwayo. uma izinhloso zabo bezinenhlekelele… bebezolahlekelwa kakhulu.
UBinance futhi unerekhodi eliqinisekisiwe lokwenza okulungile - kungenzeka ukuthi usuvele wazi ukuthi bagencwa ngo-2019, lapho cishe ama-2% ama-Bitcoin holdings ku-Exchange alahlekile. Kodwa-ke, uBinance ubuyisele ngokuphelele kubo bonke labo abathintwe yilokho kugenca ukuthola imali esikhwameni seSAFU (Secure Asset Fund for Users) okuyi-cauldron ye-cryptocurrency ebekelwe eceleni ukumboza izinto ezinjenge-hacks.
Ngingasho ukuthi sithole ukubuka konke okuhle. Ake siqhubeke, futhi sibone ukuthi ungathola kanjani ukuthi ngabe leyo altcoin oyifisayo empeleni ibhalwe ku-Exchange. Ngemuva kwakho konke, yini iphuzu lokusetha i-akhawunti uma ngabe okudingayo kungekho. Manje ngizokutshela iqhinga lokuqonda ukuthi lapho kuthengiswa khona noma iyiphi i-idijithali yemali ithengiswa.
Ukwenza lokhu ungaya ku-coinmarketcap.com, chofoza kusesho bese uthayipha i-crypto onentshisekelo kuyo. Kulokhu ngisebenzise i-Avalanche. Uma uqhafaza ku-Avalanche uzobona ikhasi lezibalo elinochungechunge lwamamethrikhi kanye neshadi lentengo. Uma ubheka ngenhla kweshadi lentengo uzobona inqwaba yezinketho ezahlukile futhi enye yazo izoba njalo inkinobho yeMakethe. Chofoza kulowo mfana omncane futhi kungekudala uzobona konke ukushintshisana okuhlukile ukuthi i-Avalanche ibhalwe ohlwini kanye namabhangqa ahlukene wokushintshanisa atholakalayo.
Ake sibone: I-AVAX ingathengwa ku-Binance ngamathokheni we-USDT, BTC, EUR, BUSD ne-BNB. Futhi khumbula ukuthi iBinance ngokuvamile inenani eliphakeme kakhulu lokuhweba cishe kuwo wonke ama-cryptocurrensets asekelwayo, ngakho-ke abantu abaningi abathengisa imali okukhulunywa ngayo benza kanjalo ngeBinance. Kunoma ikuphi, ungaphindaphinda leyo ndlela kunoma iyiphi i-cryptocurrency ukuthola ukuthi ungayithenga kuphi.
Ukujoyina i-Binance kulula impela, akunasisekelo ekubhaleni igxathu negxathu okufanele ukwenze, ngiyethemba ukuthi uzosebenzisa iphasiwedi okunzima ngempela ukuqagela, futhi uqiniseke ukuthi usethe ubuqiniso bezinto ezimbili usebenzisa i-Google Authenticator. Ukuphepha akukaze kukhulu kakhulu!
Manje sifaka imali ye-fiat, okungukuthi ama-euro noma amadola, ku-Binance.
Phezulu kunenkinobho ethi Thenga i-Crypto, thenga i-idijithali yemali. Ngemuva kokuyichofoza uzobona uhlu lwazo zonke izinhlobo zemali ezihlukile ze-fiat. Okupholile ngeBinance ukuthi ezinye zalezi zindlela zokufaka imali azikhokhiswanga, ngakho-ke uthola okungcono kakhulu ngemali yakho. Kuyo yonke iYurophu ukudluliswa kwebhange, ngakho-ke idiphozi ye-SEPA, iyi- amakhomishini angama-zero , ngenkathi uma ukhetha ukusebenzisa ikhadi lakho lesikweletu ukwenza leyo diphozithi ku-Binance kokubili i-Visa ne-Mastercard, uzokhokhiswa i-1,8% nge-euro ngayinye. Angifuni ukukhokha amakhomishini. Vele uqaphele into eyodwa lapho usebenzisa ukudluliswa kwebhange: kufanele usebenzise okufanayo ikhodi yesithenjwa sokukhokha, ikhodi yesithenjwa sokukhokha, oyibona ku-Binance. Ngale ndlela uBinance uyazi ukuthi yi- tuo idiphozi futhi ezonikezwa tuo i-akhawunti. Lapho idiphozi yakho isicubunguliwe futhi unama-euro ku-akhawunti yakho ye-Binance, ungabuyela kuthebhu ye-Buy Crypto bese ukhetha i-Cash Balance kwimenyu yokudonsela phansi.
Ekhasini elilandelayo ungafaka ukuthi ufuna ukuthenga yiphi futhi iyiphi i-idijithali yemali. I-Binance ikukhombisa nokuthi uzothola i-cryptocurrency engakanani .. ngokuyisisekelo yilokho kuphela okukhona kuyo.
Kuthiwani uma usuvele unayo i-cryptocurrency ethile futhi ufuna ukujoyina leyo buffet ye-altcoin ekushintshaneni?
Ukufaka i-crypto ku-akhawunti yakho, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho bese uchofoza inkinobho yesikhwama ngakwesokudla phezulu kwesikrini. Lokhu kuzokwandisa imenyu yokudonsela phansi futhi sinentshisekelo entweni I-Fiat ne-Spot. Faka lapho. Uzoyiswa kulesi sikrini:
Bese uchofoza inkinobho Idiphozithi, futhi ikhasi lokuqala elizovela lizoba yikhasi lediphozithi le-Bitcoin nekheli lalo le-BTC. Uma ufuna ukufaka i-BTC lelo ikheli ongalisebenzisa ukuthumela i-Bitcoin ku-Binance. Kodwa-ke uma une the Altcom ufuna ukufaka esikhundleni salokho ungamane uchofoze kuleyo nkinobho yeBitcoin ukunweba imenyu yokudonsela phansi bese useshe i-crypto onentshisekelo kuyo. Lapha ngokwesibonelo ngikhethe iCardano.
Sishilo ukuthi kunamakhomishini okuhweba: manje ngizochaza ukuthi ngiwakhokhela kanjani kancane. Ngineziphakamiso ezithile lapho ungathola khona Ukukhushulwa kweBinance, futhi ezinye akufanele ziphuthelwe.
Amakhomishini abukeka njengokwesiko, kepha ngaso sonke isikhathi kufanele afakwe .. futhi lapho eba maningi esikhathini esizayo azozenza ukuthi azwakale, ngakho lalelisisa.
Okokuqala: kunezinhlobo ezimbili zezimali zokuhweba ze-cryptocurrency, eyokuqala yiyona TImali ekhokhwayo okusebenza lapho ufaka i-oda ngentengo yamanje yemakethe. Owesibili yi Imali yomaka, okhokha lapho uhlinzeka ngokufakwa kwemali ngokufaka izinto ezifana ne- "limit order". Nginesiqiniseko sokuthi amaTaker Fees azokhokhelwa imisebenzi ofuna ukuyenza, ngakho-ke ake sigxile kulokhu.
Kokubili imali yoMenzi noMenzi iqala kwikhomishini engu-0,1000%. Kunezindlela eziningana zokunciphisa lezo zimali ngokuqhubekayo. Okokuqala ukuhweba ama-Bitcoins angaphezu kwama-50 ezinsukwini ezingama-30… ivolumu yokuhweba engafinyeleleki cishe. Ngenye indlela ungagcina ama-BNBs angaphezu kwama-50 ku-akhawunti yakho ngemali encishisiwe yomenzi engu-0,0900%. I-50 BNB, njengamanje, icishe ibe yi- € 11.100, ngakho-ke kusese yimali yesikhulu.
Uma ufuna isephulelo kumali ekhokhwayo, uzodinga ukushintshanisa i-4500 BTC ngezinsuku ezingama-30 noma ube ne-BNB engu-1.000 220.000 ku-akhawunti yakho. Yebo, lokho kungaphezu kuka-XNUMX ku-crypto BNB. Bangaki abanayo yonke le mali eceleni?
Ngakho-ke engikukhuthazayo gcina i-BNB njalo ku-akhawunti yakho bese usebenzisa lokho ukukhokha imali yokuhweba. Yenza lokho, futhi uzothola ama-25% ngokuzenzakalela kulezo zimali bese ukhokha kuphela u-0,0750%. futhi yebo, ungagcina ngisho nangaphezulu! Kufanele usebenzise lesi sixhumanisi sami nokudluliselwa, futhi ungathola enye i-20% kulezo zimali zokuhweba.
Ngakho-ke, uma uvula i-akhawunti entsha ye-Binance manje ungenza izinto ezimbili ezilula kakhulu: thenga i-BNB ukukhokhela imali yokuhweba, bese ubhalisela ukusebenzisa isixhumanisi sami. Uma wenza kanjalo, ungaqala ukuhweba ukunciphisa ngokuphelele amakhomishini ngama-40%, kusuka ku-0,1000% kuya ku-0,0600% kuphela.
Cishe akekho okhuluma ngokuhle ukukhushulwa ku-Binance etholakala ekhasini lasekhaya.
Iningi lalokhu kukhushulwa kuhloselwe i-crypto-junkies, labo abangena ekuzileni ngaphandle kwe-crypto. Kepha kusafanele ukudlula kuzo futhi ubone ukuthi ngabe ezinye zazo zinenani olithandayo yini.
Isibonelo, uma ufuna ukuhweba i-REEF crypto, bekukhona ukuncintisana okungama- $ 50.000 REEF. Ngenkathi le miklomelo ivame ukuya ekuhwebeni kwabahwebi abanamandla, kunesici selotho kokuningi kokukhushulwa: kulo mncintiswano wezohwebo ne-REEF crypto, abantu abangama-20 abanenhlanhla ababethengise nge-REEF bakhethwa ngokungahleliwe ukuthola ama-500 njengesipho. $ ye-REEF. Balahle kude.
Kulungile, manje uyazi ngamakhomishini nokuphromotha. Ake siqale ukukhuluma ngokuhweba kwangempela ku-Binance.
Ngakho-ke kunezindlela eziningana zokuhweba ngeBinance. Yini indlela elula kunazo zonke? Njengenjwayelo, qiniseka ukuthi ungene ku-akhawunti yakho ye-Binance, bese uchofoza u-Trade kusuka kubha yemenyu ephezulu, bese ukhetha u-Guqula.
Uzofika esikrinini lapho ungakhetha khona ama-cryptocurrensets ofuna ukuwaguqula bese ukhetha inani ofuna ukuhweba ngalo.
Masenze sengathi sifuna ukuhweba i-1 ETH ku-Bitcoin.
Vele ungene ngokuchofoza ku-Preview Conversion. Uzobona inani lesilinganiso sentengo futhi ukunakwa, unemizuzwana embalwa ukwamukela leyo ntengo. Uma usuqedile, usuqedile ukuhweba. Kulula kakhulu.
Okubi ngale ndlela ukuthi kukhona inani elilinganiselwe kuphela lamabhangqa okuhweba futhi lisekela kuphela ama-oda emakethe, okusho ukuthi kufanele uthembele entengo yemakethe ngaleso sikhathi esinembile.
Uma ufuna ukuguquguquka okwengeziwe, ungakuthola kuphaneli yakudala yokuhweba: kubha yokuzulazula phezulu, Ukuhweba bese kuba yiClassic.
Ngemuva kwalokho uzobona isikrini sokuhweba esinjengalesi futhi mhlawumbe ucabanga "Hewu. Ngangazi ukuthi kuzoba nzima". Thatha isinyathelo emuva! Futhi ungethuki. Ngiyakuthembisa ukuthi akunzima kangako njengoba kungabonakala ekuqaleni.
Inzuzo yokusebenzisa lolu hlobo lwesixhumi esibonakalayo sokuhweba ukuthi ingakuvumela ukuthi ubeke izinhlobo ze-oda ezithuthuke kakhulu, ezingakongela imali eningi nesikhathi esiningi.
Ukuqonda okwenzekayo ngalesi sixhumi esibonakalayo sokuhweba ake sikuhlukanise ngezigaba.
Incwadi Yoku-oda, irejista yama-oda
Ngakwesobunxele kukhona i-Order Book, incwadi yoku-oda, Zonke lezo zinombolo ezibomvu phezulu ngama-oda wokuthengisa we-cryptocurrency ethile futhi konke okuluhlaza kungama-oda wokuthenga. Yonke leyo oda yenziwa ngamanani ahlukile. Ikholomu yesobunxele kwirejista yoku-oda yinani abantu ababeke ngalo ama-oda wokuthenga noma wokuthengisa. Ikholomu eliphakathi inani lemali ye-idijithali yemali etholakalayo ngamanani entengo athile okuthengisa, futhi ekugcineni sinekholomu elifanele encwadini yoku-oda ekhombisa inani ledola elitholakala ngamanani entengo ehlukile wokuthengisa. Maphakathi kwesikrini ungabona ishadi lentengo.
Hlunga phezulu ngesikhathi esinqunyiwe
Ungayihlunga ngokuya ngezikhathi ezahlukahlukene futhi ungachofoza kumcibisholo omncane ukubuka amathuluzi eshadi uma unentshisekelo ekuhlaziyweni kwezobuchwepheshe. Okuningi kungakhulunywa ngakho .
Vula amathuluzi eshadi ngezansi
Ngakwesokudla phezulu kwephaneli yokuhweba unawo wonke amabhangqa ahlukene wokuhweba atholakala ku-Binance. Ngomsebenzi wokusesha uthola i-cryptocurrency ofuna ukuyihweba (ukuhweba, Abakhuluma isiNgisi bathi). Manje sengifuna i-ticker ADA, yeCardano, futhi njengoba ubona izigaba ezihlukene zokuhweba ziphuma. Ngiyazi, unemibuzo emibili.
Sesha umkhaza ofuna ukuqala ukuhweba ngawo
Okokuqala, lokho okushiwo yi-10x no-5x noma ama-3x kusho ukuthini eduze kwalawo ma-ADA amabili okuhweba? Basho nje ukuthi ungahweba ngokusetshenziswa kweziyishumi noma ezinhlanu noma ezintathu ngokusebenzisa Ukuhweba kwemakethe: kulapho uboleka khona imali yokuhweba ngesilinganiso, ukukhulisa umholo wakho (nokulahlekelwa).
Ngokuzimisela, usaqala nje? Ungakunaki ukuhweba okuphuziwe ngokuphelele, vumela abahwebi abanolwazi ukuthi bakusebenzise noma bafunde ukuze babe ngumhwebi onolwazi futhi ungabuqonda ngokugcwele ubungozi.
Into yesibili okungenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi kungani ngifunele i-ADA esikhundleni sokufuna iCardano. Impela, uma wena Czech Cardano, akukho lutho oluphumayo. Isizathu ukuthi ukuhweba ngababili basebenzisa izinhlobo ezifinyeziwe zamagama we-cryptocurrency, abizwa ngamathikha. Imvamisa kuyinhlanganisela yezinhlamvu ezintathu noma ezine. Futhi uthola kanjani ithikha le-crypto ofuna ukuyithenga? Iya ku-coinmarketcap bese usesha i-crypto onentshisekelo kuyo. Ithikha lizovela ngakwesokudla kwegama le-idijithali yemali.
Ngakho-ke ungathola ithikha nganoma iyiphi i-idijithali yemali. Ake sibuyele kulelo phaneli lokuhweba.
Ukuhweba Kwemakethe, ukushintshana emakethe
Ekhoneni elingezansi kwesokudla unamaTrade Trades, okusho ukuhweba emakethe. Kuboniswa kuphela ukuhweba kwakamuva okwenziwe.
Futhi ekugcineni, unesigaba sephaneli yokuhweba lapho kwenzeka khona yonke imilingo nalapho ufaka khona yonke imiyalo ebalulekile.
Ngokuzenzakalelayo le menyu ye-oda izosethwa kuma-Limit Orders. Indlela engcono yokuchaza ukuthi ziyini ukusebenzisa isibonelo: ake sithi ngokubona kwakho intengo yeBitcoin manje isiphezulu kakhulu, futhi ungakujabulela ukuthenga uma ibuyela ku-40.000. Ungafaka le oda ku-Binance - kuzofanela uthayiphe leyo ntengo engu-40.000 bese ukhetha inani leBitcoin ofuna ukulithenga. Ngokucindezela inkinobho eluhlaza yokuthenga leyo oda izongezwa kwirejista ye-oda. Uma ulele kusasa kusihlwa futhi intengo ye-BTC yehlela ku-40.000 ku-Binance, khona-ke lo myalo wokukhawulela uzoqala ngokuzenzekelayo futhi uzothola i-BTC yakho ngale ntengo ephansi kakhulu.
Ngabe ubuqondile ukuthi ama-oda wemikhawulo asetshenziswa kanjani ekuhwebeni nge-crypto? Mhlawumbe kungakuhle ukusebenzisa le-Limit Orders esikhundleni sama-Market Orders.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi imingcele yama-oda isebenzisa ama-Maker Fees njengekhomishini, hhayi Imali ekhokhwayo, kwesinye isikhathi engabiza kakhulu ku-Binance. Ama-oda omkhawulo asebenza ngokufana ngqo ohlangothini lokuthengisa: Ngingabeka i-oda elikhawulelwe le-bitcoin eyodwa uma intengo ifinyelela ku-100k - lelo oda lizohlala lapho lingenzi lutho kuze kufinyelelwe intengo.
Ngokusobala, le-oda lihlala likhanselwa. Ungasetha futhi ukuthi i-oda kufanele lisebenze isikhathi esithile kuphela kepha lokhu kuyi- isihloko sendatshana.
Ama-Market Orders yizinhlobo ze-oda ezilula kakhulu: umane ufaka inani ofuna ukulithenga futhi uthathe intengo yemakethe lapho ufaka i-oda.
Ukuphela kwento esingakhulumi ngayo ngama-Stop Limit Orders, angikwazi ukukuchaza kahle lokho.
Kepha uma ubukade uqaphile, manje kufanele wazi izisekelo zokuthi ungathenga futhi uthengise kanjani i-cryptocurrency usebenzisa ama-Market Orders nama-Limit Orders. Kukhona enye into okufanele uyigweme: Ikusasa.
Okususwayo - Ikusasa
Kuyingozi enkulu ukwedlula iMargin Trading. Ikusasa lingaba ithuluzi eliwusizo uma lisetshenziswa ngokuziphendulela ngabahwebi abangochwepheshe, kepha ama-newbies afana nawe afuna ukuhweba ama-altcoins ashubile anokusizakala okungu-125x… akubona abantu abanesibopho. Uma uphikelela ekuhwebeni ngamandla, lapho-ke ungahle ucabangele amaTokheni avumelekile, okunikeza amandla alinganiselayo futhi aqede ubungozi bokuqedwa .. ngakho ukuhweba okuhle. Nalokhu kusasa kufanele sikhulume ngalokhu.
Sibonile ukusebenza okuyisisekelo kokuhweba ku-Binance.
Kodwa-ke lokhu kungenye yezinsizakalo eziningi ezinikezwa kule buffet enkulu ye-cryptocurrency, ngakho-ke ake sibheke ukuthi yini enye esemenyu.
Ngakho konke lokhu kusakazwa kwemali engamaphepha emisha emhlabeni wonke, nawe unentshisekelo ehlekisayo ezimalini zakho. Yebo, iBinance Earn ikunikeza amandla okuthola amazinga wenzalo azungeze i-6% APY (isivuno samaphesenti sonyaka) kwezinye zezimali ze-crypto.
Ukuthola i-Binance - Imigomo Eguqukayo
Ungakhetha ukukhetha ukonga okuguquguqukayo, okusho ukuthi ungafinyelela i-crypto yakho nganoma yisiphi isikhathi, noma ungayivimba leyo crypto isikhathi esifinyelela ezinsukwini ezingama-90 ukuthola isilinganiso senzalo esiphakeme kancane.
I-Binance Harn - Imigomo Engaguquki
Imikhiqizo yokonga enobungozi obukhulu iyatholakala ngamanani aphakeme kakhulu, kepha khumbula ukuthi uthatha ubungozi obukhulu ukuthola inzuzo eningi.
Ukuzuza kweBinance - Imikhiqizo Yengozi Ephezulu
Isizathu sokuthi le mikhiqizo ekhiqiza inzalo ithandwe kakhulu ukuthi abantu abaningi bagcina ama-cryptocurrensets esikhwameni semali futhi bahlale lapho bengenzi lutho. Esikhundleni salokho, abanye abantu bathatha ingxenye yokubamba kwabo ukuze bathole inzalo ngenkathi belinde amanani entengo ye-cryptocurrency aqhume bese eshaya intengo yabo abayifunayo.
Omunye umkhiqizo oshisayo uBinance awunikezayo yikhadi labo le-crypto visa.
I-Binance Visa Crypto Debit Card
Kepha kungani emhlabeni ungafuna ukuthola eyodwa?
Masibhekane nakho, ukuguqula ama-cryptocurrensets nokukhipha leyo mali ebhange lakho kungaba yinkinga. Futhi, kuhle ukucabanga ngokuzinika okuthile, uma kungahambanga kangako .. ngakho-ke uma unakekela futhi ufuna ukwazi ukusebenzisa i-crypto yakho lapho iVisa yamukelwa khona, khona-ke ikhadi le-Crypto yilokho okudingayo. Ikhadi liyatholakala emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Lelo khadi elihle elimnyama leBinance likhululekile ngokuphelele, futhi uBinance uqobo akakukhokhisi noma iyiphi imali yokucubungula noma yokuphatha. Lelo khadi lixhuma ne-akhawunti yakho ye-Binance Exchange! Futhi, ungakhuphukela emuva ku-8% uma usebenzisa lelo khadi ngakho yebo uma unenhlanhla yokwazi ukuthola ikhadi le-binance ungahle uthande ukulibamba manje.
Angikukhuthazi ukuthi wenze lokhu, kepha uBinance uphinde anikeze ngemalimboleko ye-crypto ehlanganisiwe uma ufuna.
Indlela eqonde kunazo zonke yokuyichaza ukuthi kufana nokuthola imalimboleko esitolo sezitolo, lapho unikeza khona isibambiso ngesimo sento enenani (njengewashi) bese uthola imali mboleko. Ku-Binance ungathola isilinganiso sokuqala se-Loan to Value (LTV) esingu-55% futhi uzocelwa ukuthi ungeze ama-cryptocurrensets amaningi ukuvikela imalimboleko yakho uma i-LTV inyukela ku-75%. Uma i-LTV ishaya i-83%, imali yakho ye-crypto izothengiswa yiBinance ukumboza imalimboleko .. awufuni lokho kwenzeke.
Lokho abantu abaningi abakwenzayo ngalezi zimali mboleko ukuthenga ama-cryptocurrensets amaningi okuyindlela yokusizakala, kepha noma kunjalo, uma unentshisekelo, ngaleli thuluzi unganikeza ama-cryptocurrensets ahlanganisiwe futhi uboleke namakhilogremu ama-euro noma ama-US dollars .. uma ufuna.
Bese kuba nesici esaziwa ngokuthi yi-Binance Liquid Swap okungenye yezindlela ongahola ngayo imali engenayo ngama-cryptocurrensets futhi ongathola inzuzo ephezulu. Noma kunjalo khumbula ukuthi kuthwala izingozi!
Ukushintshwa Kwe-Liquid Liquid
Esinye isici esinikezwa yiBinance yiLaunchpool yayo. Ngokuyisisekelo lo mkhiqizo uvumela abasebenzisi be-Biannce ukuthi bakhiqize amathokheni njengomvuzo wokuthola ama-cryptocurrensets athile. Amanye ama-cryptocurrensets afana ne-Litentry awakaze athengiswe esidlangalaleni noma i-Initial Exchange Offering, kunalokho ahambisa ingxenye yethokheni yokuqala kusetshenziswa iLaunchpool.
Umkhiqizo wokugcina engifuna ukukhuluma nawe ngawo yiBinance Launchpad: iyipulatifomu ekhethekile yeBinance yokwethula amaphrojekthi we-crypto.
Kulapho abafana abafana nathi bangathola khona ukwabiwa kwamathokheni ngamanani entengo amahle kakhulu .. kumaphrojekthi adumile ku-Launchpad ukwabiwa kwamathokheni ngokuvamile kwenziwa ngohlelo lwe-lottery - ukuyibeka phansi kalula, izinhlamvu zemali ze-BNB onazo ku-akhawunti yakho .Binance, uthola amathikithi amaningi e-lottery. Uma uwina ilotho, unelungelo lokuthenga i-altcoin ethile ngenani elinqunyiwe. Ngakho-ke, uma nje ukhetha iphrojekthi eqinile futhi unenhlanhla ngokwanele yokuthola isabelo, maningi amathuba okuthi uzohamba kahle ngokushesha lapho ukuhweba komphakathi sekuqala ukusebenza ku-Binance. Kungakho cishe yonke imisebenzi esungulwe ku-launchpad ibhaliswe ngokungapheli ngabantu abaningi, yingakho lolu hlelo lwe-lottery lusetshenzisiwe: bekuwumzamo we-binance wokwenza lezi zabelo zenziwe kahle futhi zenziwe kahle. Futhi akusikho ukuthi i-binance yabelana ngalezi Zipho Zokuqala Zokushintshana nokunye ukushintshisana, ngakho-ke uma ubona iphrojekthi kuphedi yokuqalisa lelo thuba lizoba leBinance kuphela. Kuyafaneleka ukundiza ngalelo pad lokuqalisa ukuze ubone ukuthi kukhona yini okuhlekisayo ...
Sesizophela. Amagama ambalwa nje okukhuluma ngezinye zezinsizakusebenza zemfundo ezinikezwa yiBinance mahhala.
Owokuqala yiBinance Academy, enikezela ngezinsizakusebenza ezinhle kuma-cryptocurrensets ahlukahlukene nakwizihloko ezihlobene ne-cryptocurrency. Okwesibili kuyinto engaphansi kakhulu: iyona Binance Research. Lapha ungathola izinsizakusebenza ezihlobene namaphrojekthi ngazo zonke izinhlobo zezibalo namagrafu, ezibhekana nokufakwa kuhlu kokunikezwa kwamathokheni wephrojekthi enikeziwe, i- Ukwabiwa kwamathokheni lokho ukusatshalaliswa kwabo, ishejuli yokukhishwa kokusatshalaliswa nokunye okuningi. Bheka, kulula kakhulu ukuyifunda.
Umhlahlandlela usuphelile ... kepha iqiniso ukuthi ngisanda kuklwebha ingaphezulu nokuthi iBinance inikeza okuningi kakhulu kunalokho engakusho ku-athikili eyodwa.
Uma unentshisekelo yokuqalisa ku-Binance, ungakhohlwa leso saphulelo semali sokuhweba esikhethekile esingu-20% ngokubhalisela mahhala ngesixhumanisi sokudlulisela.
Sicela wabelane ngalokhu Yabelana ngalokhu okuqukethwe
Ivula ewindini elisha
Funda ezinye izindatshana
Isihloko esilandelayoUngakhiqiza kanjani ukulima nge-Liquid Swap ku-Binance
Ungahle uthande futhi
Isaphulelo kumali ye-Binance
I-Binance: Ukudluliswa kwamakhredithi ngokushesha nge-SEPA wire transfer
Izinhlamvu zemali zobumfihlo ezingcono kakhulu eziyi-10 nokuthi ungazithenga kanjani
.... UKUQALA NGOKUSHESHA ....
Isaphulelo se-20% kumakhomishini
Uma kusamele ujoyine iBinance, sebenzisa le khodi yokudlulisela:
noma landela lesi sixhumanisi:
Iyini i-AMM, i-Automated Market Maker?
Ingabe u-Binance Uphephile? Iphathe u-30% wevolumu yendawo ye-cryptocurrencies ngoMashi 2022
Imaphi amaqoqo e-NFT amasha ezayo ngo-2022?
Amamethrikhi okufanele acatshangelwe ukuthenga nokuthengisa ama-NFT
I-Binance Smart Chain
Ngibhala phansi amanothi ami ukuze ngikwazi ngekhanda. Uma zikulungele nawe, ngiyajabula.
Izihlahla ze-Merkle Amaphuzu azungeze wonke Binance I-Binance e-Afrika Ukudluliselwa kweBinance I-ID yokudluliselwa kweBinance I-Binance Smart Chain bitcoin Blockchain Boca Juniors Ikhodi yokudluliselwa kweBinance Ama-Dapps Defi DEX waseMoresheti ethereum Umshini we-Ethereum Virtual Machine (EVM) ukulahleka okungenamusa I-Launchpad I-Metamask Izimayini zeBitcoin NFT nenxusa Amathokheni angabonakali I-Pancakeswap ukulahlekelwa okungapheli Iphuli yoketshezi Ubufakazi bomsebenzi I-Rarity Ikhodi yokudluliselwa Inethiwekhi ye-Binance Smart Chain Inethiwekhi ye-Ethereum izinhlelo ezimaphakathi izinhlelo ezinikezwe amandla Izinkontileka ezi-Smart ISorare Amakhadi omvuzo Amakhadi weSorare angavamile Amakhadi weSorare Super Rare Amakhadi Ahlukile weSorare Stablecoin Ukungahluki I-Vitalik Buterin Wallet Vumelani ukulima
Ngiphoqelekile ukukutshela ukuthi isiphequluli sakho sigcina amakhukhi. _ _ (ツ) _ / ¯